Umthandazo wenceba kaThixo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kuyimfuneko ukukhumbula ukuba sinokuhlala sithembela kwinceba kaThixo, ophendula imiphefumlo yethu kwaye abe ngumsindisi wethu. Ukuthandaza umthandazo weNceba kaThixo Kuyacetyiswa ukuba ube nerosari eqhelekileyo, ngokwesiko. Kwiindawo ezingcwele ezinikezelwe kwinceba kaThixo; Lo mthandazo wandulelwa yimithandazo emibini ethathwe kwiDayari kaSaint Faustina yaza yalandelwa eminye imithandazo. Kule nqaku sinika iinkcukacha ngendlela egqibeleleyo yokuthandaza kwi-chaplet yenceba.
1 Imbali emfutshane yoMthandazo kwiNceba kaThixo:
2 Ulwakhiwo lomthandazo wesithsaba seNceba kaThixo
3 Kuya kufuneka uzinqumle usebenzisa uphawu loMnqamlezo
4 Wenze umthandazo wokungena
5 Umthandazo kuBawo wethu
6 Bhengeza iSichotho sikaMariya
7 Thandaza umthandazo wabaPostile
8 Kwiintsimbi ezinkulu zerosari Bhengeza uBawo ongunaPhakade
9 Kwi 10 amaso amancinci kwishumi ngalinye
10 Umthandazo wokugqibela (ukhetho)
11 Umthandazo weChaplet yeNceba kaThixo ngohlobo lwe novena
Imbali emfutshane yoMthandazo kwiNceba kaThixo:
Eli siko, njengoko lidumile namhlanje, laqalwa ngenxa yedayari yoonongendi basePoland uSaint Faustina Kowalska, owayekwabizwa ngokuba ngu "Mpostile Wenceba", apho achaza iincoko awayenazo noYesu Krestu, azifaka kwidayari. kwisicelo sakhe somamkeli zetyala, Usikelelwe uMichał Sopoćko, kunye noYesu Krestu ngokwakhe. Ukuzinikela kwasasazeka emva kokufuduswa kweepali kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
Ulwakhiwo lomthandazo wesithsaba seNceba kaThixo
Zinqamle ngomqondiso woMnqamlezo.
Bhengeza isivakalisi sokuvula (ngokuzithandela).
Thandaza uBawo wethu.
Bhengeza iSichotho sikaMariya.
Cengceleza iSivumo Sokholo Sabapostile.
Thandaza "uBawo ongunaPhakade"
Yithi "Ngentlungu yakho" kangangezihlandlo ezilishumi kwichotho uMariya ubuhlalu.
Yithi ngamashumi amane, uthi "uBawo ongunaPhakade" kwibhanti enkulu ka "Bawo wethu" kunye "Nentlungu Yakhe Ebuhlungu" kwiincinci ezincinci "Bingelela uMariya".
Ekupheleni kwamashumi amahlanu, kwi irosari, cengceleza umthetho kathathu ("Thixo oyiNgcwele ...").
Thandaza umthandazo wokugqibela (ukhetho).
Kuya kufuneka uzinqumle usebenzisa umqondiso womnqamlezo
Beka isandla sakho sokunene ebunzini lakho, ubize amagama athi "Egameni likaBawo", uze ubeke isandla sakho sasekunene ngezantsi komphakamo wesinqe, ubize amagama athi, "Kwaye ngunyana". Emva koko kuya kufuneka ubeke isandla sakho sasekunene egxalabeni lasekhohlo ubize "Kwaye komoya", shenxisela isandla sakho sasekunene egxalabeni lasekunene ubize "Ngcwele, Amen".
Wenze umthandazo wokungena
Nkosi Thixo; Kumkani uSomandla: zisezandleni zakho zonke izinto. Ukuba ufuna ukugcina abantu bakho, akukho mntu unokumelana nentando yakho. Wena wenza izulu nomhlaba nako konke okukuko.
Ungumnini wezinto zonke. Ngubani onokumelana noKumkani? Nkosi Thixo woobawo bethu: Yiba nenceba kubantu bakho kuba iintshaba zomphefumlo zifuna ukusilahlekela kwaye ubunzima obuziswe kuthi bukhulu kakhulu, uthe: “Cela, uya kunikwa. Lowo ucelayo, uyazuza; Nantoni na eniyicela kuBawo egameni lam, woninika. Kodwa cela ngokholo.
O Igazi naManzi aphuma entliziyweni kaYesu, njengoMthombo weNceba kuthi, ndiyathemba Wena (Idayari, i-84). Okokuqala, uBawo Wethu Osezulwini, Yibonge uMariya kunye nesiVumo SabaPostile kuthandazwa kanye.
Umthandazo kuBawo wethu
Kulapha apho uBawo wethu owaziwayo kufuneka abhengezwe ngokuvakalayo nangokucacileyo, ukuba umthandazo ongafanelanga ukuba usilele kuwo nawuphi na umthandazo. Ukukhumbula ukuba xa sithandaza kufuneka sikwenze ngokusuka entliziyweni, ukuziva onke amazwi esiwaphakamisayo egameni leNkosi kwaye ukuba asive.
Bhengeza iSichotho sikaMariya
Kule nxalenye yomthandazo a Dumisa uMariya umthandazo, Ukuthobela ulungiselelo olumiselwe olu hlobo lweemeko.
Thandaza umthandazo wabaPostile
Ndiyakholelwa kuThixo, Bawo uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba. Ndiyakholelwa kuYesu Krestu, okuphela koNyana wakhe, iNkosi yethu, owazalwa ngomsebenzi nangobabalo loMoya oyiNgcwele, owazalwa yiNtombikazi enguMariya, weva ubunzima phantsi koMandla kaPontiyo Pilato; Wabethelelwa emnqamlezweni, wasweleka wangcwatywa, wehla waya esihogweni, ngomhla wesithathu wavuka kwabafileyo, wenyuka waya ezulwini kwaye uhleli ngasekunene kukaThixo uSomandla uYise. Ukusuka apho kufuneka eze kugweba abaphilayo nabafileyo.
Ndiyakholelwa kuMoya oyiNgcwele, kwiCawe yamaKatolika engcwele, kubudlelane babangcwele, kuxolelo lwezono, kuvuko lomzimba kunye nobomi obungunaphakade. Amen.
Kwiintsimbi ezinkulu zerosari Bhengeza uBawo ongunaPhakade
UBawo ongunaphakade kufuneka azivakalise kwezi akhawunti ukuze anikele kwaye emva koko abe nombulelo ngosindiso lwehlabathi, ukongeza ekuxolelweni kwezono enkosi kumbingelelo kaYesu Krestu.
Kwi 10 amaso amancinci kwishumi ngalinye
Ngokukhathazeka kwakhe, yiba nenceba kuthi nakwilizwe liphela. Phinda "uBawo ongunaPhakade" kunye "nokuKhathazeka kwakhe": (Inombolo 6 no-7)
Yitsho amanye amashumi amane. Emva kwamashumi amahlanu, i-doxology yokugqibela (kathathu): uThixo oyiNgcwele, onamandla oNgcwele, Ongcwele ongafiyo, yiba nenceba kuthi nakwihlabathi liphela.
Umthandazo wokugqibela (ukhetho)
Owu Thixo ongunaPhakade, inceba yakho ayinasiphelo kwaye ubuncwane bemfesane abuphelanga, Ukujonga kwakho ngobubele kubuyela kuthi kwaye inceba yakho iyanda kuthi, ukuze ngamaxesha anzima singalahli ithemba okanye sidimazeke, endaweni yoko, ngokuzithemba okukhulu, Sinikezela kwintando yakho engcwele, enguLuthando neMfesane yaYo.
Umthandazo weChaplet yeNceba kaThixo ngohlobo lwe novena
Kweli candelo lokugqibela, uthathe isigqibo sokunyusa umthandazo weChaplet, ngokuhlonipha inceba kaThixo. Kuya kufuneka wazi ukuba nguwuphi umthandazo owaziwayo ukuba ubonakaliswe ngudade owaziwayo uFaustina owayephethe ukuwuphinda-phinda, ngakumbi abo babephethwe zizifo ezithile okanye babephulukana.
Ngapha koko, kukholelwa ukuba yayinguThixo ngokwakhe owabongoza uFaustina ukuba awucengceleze lo mthandazo engayeki, kwaye ke uya kufumana umbulelo ngomsebenzi wakhe onzima nonyanisekileyo.
Le Chaplet, nangona kunokwenzeka ukuba uphakamise lo mthandazo nokuba leliphi ixesha losuku esikulo, kuthiwa kufuneka lwenziwe ngohlobo lwe-novena, kwaye ngenzondelelo enkulu kwiintsuku ezisithoba ngaphambi komthendeleko wenceba . Kukwathiwa kukho isithembiso apho novena athandaza ngokulinganayo kuyo yonke imiphefumlo.
Kuyenzeka ukuba ucengceleze umthandazo onje, uqala kuphela kwizicelo zakho, nangona unokuphakanyiswa ucinga ngezicelo okanye iminqweno yabanye abantu.